Hampianatra anareo vitsivitsy araka ny tokony ho tetika mba handray ny paompy mivaingana nidina - China Qingdao CO-NELE Group
Hampianatra anareo vitsivitsy araka ny tokony ho tetika mba handray ny paompy mivaingana teo
Raha ny sodina dia nametraka, raha ny fisainan'ny simenitra paompy TAPAKA FANTSONA no lehibe, ny azo tsapain-tànana dia mety mikoriana midina noho ny azy manokana lanja amin'ny tia fantsona, ka mahatonga ny banga eo amin'ny fampitana sodina, na mahatonga ny simenitra ho segregated noho ny tena mikoriana, amin 'izany ka mahatonga ny fampitana sodina ho lalan-. Mba hisorohana izany, dia afaka manaraka ireto fepetra ho raisina:
1. Rehefa nidina pumping simenitra, ny tena mikoriana ny simenitra Mifandray akaiky ny slump. Water tokony pumped alohan'ny pumping simenitra, jereo ny tonon-taolana ny sodina tsirairay mba hahazoana antoka fa ny tombo-kase no tsy seep rano, ary avy eo dia mba fenoy ny rihitra ny fomba fikojakojana ny sodina ary tamin'izany andro izany dia afaka ny rivotra.
2. Raha ny fisainan'ny TAPAKA FANTSONA dia lehibe noho 4 ° -7 °, ny sodina marindrano mifanaraka amin'ny halavany ny mihoatra ny 5 andron'ny mitsangana indray mitete dia tokony homena eo anoloan'ny downwardly faran'ny nanongilana sodina, sy ny tenantsika hirotsaka ny simenitra azo misoroka ny frictional fanoherana.
Qingdao mivaingana paompy kamiao vidin'ny (4)
3. Raha ny sodina fironana dia lehibe noho 7 ° -12 °, ankoatry ny marindrano sodina ny 5 fotoana lava eo anoloan'ny napetraka faran'ny tia sodina, ny setroka miditra tsimoramora dia tokony homena amin'ny farany ambony ny teo sodina. Nandritra ny pumping dingana, raha misy lavaka ao ny tia fantsona, ny setroka miditra tsimoramora dia tokony hovohana aloha mandra-tia fantsona feno simenitra, ary rehefa tonga ny setroka miditra tsimoramora Tondraka ny feta, ny setroka miditra tsimoramora mihidy sy ara-dalàna pumping dia nanao .
4. Ny midina sodina amin'ny rano indray mitete lehibe azo nametraka ao afovoan-mitsangana midina sodina hametraka nijanona sodina izay miasa ho toy ny notapahiny. Insert maro sponjy mafy baolina na fanadiovana plugs alohan'ny pumping ny rihitra mba tsy ny fahaverezan'ny rihitra. Afaka mihazona ny lanjan'ny ny rihitra.
5. Raha voafetra ny toerana toe-piainana, rehefa misy tsy ampy ny toerana mba handamina ny marindrano eo anoloan'ny sodina faran'ny midina nanongilana sodina, ny Hose, kiho, na sodina annular azo ampiasaina fa tsy ny hampitombo ny frictional fanoherana sy hisorohana ny azo tsapain-tànana tsy mikoriana midina eo amin'ny sodina fizarana.
Qingdao mivaingana paompy kamiao vidin'ny (6)
Na izany aza, na inona na inona na ny simenitra paompy mifandray miakatra na downwards, ny marindrano fiovam-po halavan'ny samy hafa fantsona, amin'ny tena TAPAKA FANTSONA, noho ny endrika samihafa, isa sy soridrefitany ny fantsona, ny tena fampitana lavidavitra sy ny haavony ihany koa ny hafa, izay dia mety ny kajy. Soloy ny bongo fantsona, kiho, Hose, ka mitsangana Tube, nidina mitsangana fantsona, sns ho marindrano ny halavany. Mandritra izany fotoana izany, ny fitantanam-bola marindrano vidy ihany koa mifandray amin'ny simenitra toetra, sodina savaivony sy ny sisa.
Post fotoana: Nov-21-2019